ကော့စတာရီကာနိုင်ငံ - ဝိကိပိဒိယ
15 Jun 2011 - 04 Apr 2019
နိုင်ငံတော်ဆောင်ပုဒ် - "Long live work and peace"
နိုင်ငံတော်သီချင်း - Noble homeland, your beautiful flag
ဧရိယာ - ၁၉,၆၅၃ စတုရန်းမိုင် (၅၁, ၁၀၀km²) (အဆင့်: ၁၂၈)
ရေဖုံးလွှမ်းမှု - ၀.၇%
စံတော်ချိန်ဇုန် UTC -၆
ရုံးသုံးဘာသာများ စပိန်ဘာသာ၊ Limonese Creole၊ Bribri၊ Jamaican Patois
လူဦးရေ - ၄,၆၀၈,၄၂၆ (အဆင့် - ၁၂၃)
လူဦးရေသိပ်သည်းမှု - ၂၂၀/sq mi (၈၉/ km2 (အဆင့် - ၁၀၇)
အမျိုးအစား စည်းမျဉ်းခံ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရ
သမ္မတ - လော်ရာ ချင်ချေလာ
လွတ်လပ်ရေး - မေ ၁၀၊ ၁၈၅၀
GDP(PPP) US $၅၁.၁၆၆ ဘီလီယံ (အဆင့် - )
GDP(PPP) US $ ၁၁,၂၁၅ (အဆင့် - )
HDI ▼၀.၇၂၅ (အမြင့်) (အဆင့် - ၆၂)
Calling code +၅၀၆
ကော့စတာရီကာ (Costa Rica) နိုင်ငံ၏ တရားဝင်အမည်မှာ ကော့စတာရီကာသမ္မတနိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ ဗဟိုအမေရိကတွင် တည်ရှိသည်။ မြောက်ဘက်တွင် နီကာရာဂွါနိုင်ငံ၊ တောင်ဘက်နှင့်အရှေ့ဘက်တွင် ပနားမားနိုင်ငံ၊ အနောက်ဘက်နှင့် တောင်ဘက်တွင် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ၊ အရှေ့ဘက်တွင် ကာရစ်ဘီယံ ပင်လယ် တို့နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည်။
ချမ်းသာသောကမ်းရိုးတန်း ဟုအမည်ရသော ကောစတာရီကာသည် ၎င်း၏ စစ်တပ်ကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ၁၉၄၉ မှစ၍ တရားဝင် ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။  ရှေးဦးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ(၂၂)နိုင်ငံစာရင်း တွင်ပါဝင်သော တစ်ခုတည်းသော လက်တင်အမေရိက နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည်။  လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံများထဲတွင် လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုညွှန်းကိန်း ပုံမှန်မြင့်မားသောတိုင်းပြည်ဖြစ်သည်။ ယူအင်န်ဒီပီ ၏ ၂၀၁၀ခုနှစ် စစ်တမ်းအရ ကမ္ဘာ့အဆင့် (၆၂)ဖြစ်သည်။  ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုညွှန်းကိန်းအဆင့် အနေဖြင့် ၂၀၁၀ခုနှစ်တွင် တစ်ကမ္ဘာလုံး၌ အဆင့်(၃)၊ အမေရိကနိုင်ငံများထဲတွင် အဆင့်(၁) ဖြစ်သည်။ 
၂၀၀၇ခုနှစ်တွင် ကော့စတာရီကာအစိုးရက ၂၀၂၁ခုနှစ်အရောက်တွင် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ကာဗွန်မဲ့တိုင်းပြည် အဖြစ် ဖြစ်လာရန် အစီအစဉ်ချမှတ် ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိသည်။  နယူးအီကော်နောမစ် ဖောင်ဒေးရှင်း ၏ အဆိုအရ ကော့စတာရီကာသည် ပျော်ရွင်မှုညွှန်းကိန်း အရ အဆင့်(၁) ဖြစ်ပြီး၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းမှု အကောင်းဆုံး တိုင်းပြည် ဖြစ်သည်။ 
↑ El Espíritu del 48။ Abolición del Ejército (in Spanish)။ 2008-03-09 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Costa Rica။ World Desk Reference။ 2009-06-09 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Costa Rica။ Uppsala University။ 2009-06-09 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Costa Rica's new president: Thriller for Chinchilla", The Economist, 2010-02-11. 2010-02-16တွင် ပြန်စစ်ပြီး.
↑ UNDP Human Development Report 2010။ Table 1: Human development index 2010 and its components (PDF)။ UNDP။ 2010-11-06 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ pp. 5, 49 and 144
↑ Yale Center for Environmental Law & Policy / Center for International Earth Science Information Network at Columbia University။ 2010 Environmental Performance Index။ 2010-01-27 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ John Burnett. "Costa Rica Aims to BeaCarbon-Neutral Nation", National Public Radio (NPR.org), 2008-02-18. 2009-04-27တွင် ပြန်စစ်ပြီး.
↑ Alana Herro. "Costa Rica Aims to Become First "Carbon Neutral" Country", Worldwatch Institute, 2007-03-12. 2009-04-27တွင် ပြန်စစ်ပြီး.
↑ Alejandro Vargas. "País quiere ser primera nación con balance neutro de carbono" (in Spanish), La Nación, 2007-02-21. 2009-04-27တွင် ပြန်စစ်ပြီး.
↑ Ashley Seager. "Costa Rica is the world's happiest and greenest country in the world.", London: Guardian.co.uk, 2008-07-04. 2009-07-04တွင် ပြန်စစ်ပြီး.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကော့စတာရီကာနိုင်ငံ&oldid=248087" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ ဇွန်​ ၂၀၁၅ ရက် ၀၉:၂၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။